Xasaasi: Kan isii Mayee Kan Qaado: Arsenal Oo Dooratay Xiddiga Ay Arsenal Doonayso In Ay United Ku Darto Heshiiska Sanchez & Man United Oo Xiddig Kale La Doonaysa Mana Ah Mkhitaryan – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Xasaasi: Kan isii Mayee Kan Qaado: Arsenal Oo Dooratay Xiddiga Ay Arsenal Doonayso In Ay United Ku Darto Heshiiska Sanchez & Man United Oo Xiddig Kale La Doonaysa Mana Ah Mkhitaryan
Xasaasi: Kan isii Mayee Kan Qaado: Arsenal Oo Dooratay Xiddiga Ay Arsenal Doonayso In Ay United Ku Darto Heshiiska Sanchez & Man United Oo Xiddig Kale La Doonaysa Mana Ah Mkhitaryan
Kadib markii ay Man city isaga baxday baacsiga xiddiga kooxda Arsenal ee Alexis Sanchez waxa ay u muuqataa in ay wadadu xor u noqotay kooxda Man United si ay u hesho saxiixa xiddigii hore ee kooxda Barcelona.
Mourinho ayaan si cad u sheegin in ay Man United u dhaqaaqi doonto saxiixa xiddiga reer chile laakiin waxa uu sidoo kale sheegay in ayna seegi doonin hadii ay soo baxdo fursad ay ku heli karaan xiddiga.
Sida laga soo xigtay Wargayska Daily Star Arsenal ayaan ka soo hor jeedin in uu Alexis Sanchez ku biiro Old Trafford laakiin waxa ay doonayaan in heshiiska lagu daro xiddiga reer France ee Athony martial.
Tababare Arsene Wenger ayaan Sanchez u ogolaan doonin in uu kooxda ka tago ilaa inta uu gacanta ku dhigayo badal munaasib ah oo buuxin kara booskiisa.
Wenger ayaa Martial u arka xiddig ku haboon kooxdiisa marka loo eego qaab ciyaareedka cajiib ah ee uu soo bandhigayo xilli ciyaareedkan.
Dhanka kale kooxda Man United ayaa ka fikiraysa in ay heshiiska xiddiga ku darto daafaca reer France ee Chris Smalling hadii ay Arsenal doonayso.